के कारण बढ्छ बिहे पछि महिलाको हिप ? – khabarchakra.com ~ News from nepal
के कारण बढ्छ बिहे पछि महिलाको हिप ?
२ आश्विन २०७६, बिहीबार १२:३६ 19/09/2019 Khabar Chakra
एजेन्सी : बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन देख सकिन्छ । साथै बिवाह पछी महिलाहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । सामान्य तय अन्य महिलाको तुलनामा विवाहित महिलाको हिप र स्तनको आकारमा धेरै परीवर्त भएको देख्न सकिन्छ ।
हाम्रो देशमा सामान्यतय महिलाहरु सानै उमेरमा शारीरिक विकास नभएकै बेला बिवाह गर्छन त्यस कारणपनि बिहेपछी हिप र चेस्टको साइज बढ्नु अथवा ठुलो हुनु सामान्य मानिन्छ । तर अमेरिकामा एक सोधकर्ताहरुले भने भिन्नै तथ्य पत्ता लगाएका छन् । सोधकर्ताका हरुको अनुसार जुन महिलाले एक दिनमा पटक पटक यौन सम्बन्ध राखेका थिए उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको भन्दा अलिकति बढी भएको पाएका थिए । साथै हिपको आकार ठुलो भएका महिलाहरुलाई गर्भवती हुदा खासै समस्या नहुने समेत एक अनुसन्धानले बताइएको थियो ।
अनिन्द्रा बिहेपछि धेरैजसो महिलाहरूको सुत्ने समय र दैनिकी बद्लिन्छ । थपिएको जिम्वेबारी बहन गर्दा गर्दै सुत्नको लागि पर्याप्त समयको अभावमा धेरैपटक अनिदो बस्नु पर्ने हुनसक्छ । कम्तिमा ७ घण्टा नसुत्नुको कारणले महिलाहरूको तौल बढ्ने गर्दछ । हर्मोनको परिवर्तन बिहे पछि परिवर्तन हुने जिवनशैली तथा चाहानाका कारण महिलाहरूको शरिरमा हर्मोन तिब्र रुपमा परिवर्तन गराउँछ,जुन तौल बढाउन जिम्मेवार छ ।
उमेरको असर विभिन्न अनुसन्धानका अनुशार बिहेपछि बढ्दो उमेर सँगै महिलाहरूको मेटाबोलिजमको दर कम हुदै जान्छ । जस कारण शरिरमा भएको बोसोको घट्ने प्रकिया कम हुन्छ र तौल बढ्छ । सामाजिक दबाब कम हुनु महिलाको लागि बिहे अघि राम्रो देखिन तथा राम्रो पती पाउनका लागि आफ्नो शरिरको फिटनेसलाई विशेष ध्यान दिएका हुन्छन । तर बिहे पछि यो दबाब कम हुन्छ जसकारण महिलाहरु आफ्नो फिटनेसमा ध्यान दिदैनन् र तौल बढ्न जान्छ ।
धेरै टिभी हेर्नु प्रायजसो बिहे पछि हाम्रो समाजमा श्रीमान कामका लागि बाहिर जान्छन भने श्रीमती गृहणी को रुपमा घरमै बस्ने प्रचलन रहेको छ। दिउसोको खाली समयमा टेलिभिजन हेर्नु उनिहरुको सामान्य दैनिकी कुरा हो । जसबाट उनिहरुको शरिर शारिरिक रुपले निष्क्रिय रहने हुदाँ मोटोपन बढ्छ । टेन्सन बढ्नु बिहेपछि धेरैजसो महिलाहरुलाई नयाँ वाताबरणमा घुलमिल गर्न असहज हुन्छ ।यसले तनाब बढ्छ र साथसाथै तौल पनि ।
गर्भवती अवस्था सामान्यतया बिहे भएको १-२ बर्ष पछि धेरैजसो जोडीहरु सन्तान जन्माउने गर्दछन। महिला गर्भवती हुँदा आउने हर्मोनको परिवर्तन तथा चुस्त पोषणको कारणले मोटोपन बढ्ने गर्दछ। लापर्वाही बिहेअघि महिलाहरु आफ्नो खानपिनलाई नियन्त्रणमा राखेका हुन्छन। तर बिहे पछि जिवनशैलीको कारण खानपिनमा खासै ध्यान दिन पाउदैन्न । त्यसैले तौल बढ्छ ।
खानपिनमा परिवर्तन बिहेपछि पतिको घरमा जस्तो खाना हुन्छ त्यस्तै खाना खानुपर्छ, धेरैजसोले ज्यादा फ्याट र मसलादार खाना खाने गर्दछन यसले तौल बढाउँछ। प्राथमिक्तामा परिवर्तन बिहेपछि पति र घरपरिवार अनुशारको रुटीन बन्नेगर्दछ । यसकारण महिलाहरु आफ्नो ध्यान राख्ने मौका पाउदैन्न र तौल बढ्छ ।
← बाँकेका सयौँ घर डुबानमा
२२१ जना केटासँगको प्रेम असफल भएपछि कुकुरसँग बिहे →
सावधान ! जुठो खाँदा एकै परिवारका ९ जनालाई कोरोना संक्रमण
२७ माघ २०७६, सोमबार १८:३७ Khabar Chakra 0
१४ चैत्र २०७६, शुक्रबार १९:३१ Khabar Chakra 0
शनिवारदेखि सबै पास खारेज, उपत्यका प्रवेश गर्ने नाका ठप्प
२ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १६:१० Khabar Chakra 0